Vaovao - Herin'ny Weichai, mpiorina Shinoa mitondra amin'ny ambaratonga avo kokoa
Ny herin'i Weichai, mpamokatra sinoa mitondra amin'ny ambaratonga avo kokoa
Vao tsy ela akory izay, nisy vaovao vaovao eran-tany teo amin'ny sahan'ny maotera sinoa. Weichai Power dia namorona ny gazoala diesel voalohany miaraka amin'ny fahombiazan'ny hafanana mihoatra ny 50% ary mahatsapa ny fampiharana ara-barotra eto amin'izao tontolo izao.
Tsy ny fahombiazan'ny hafanan'ny vatan'ny motera ihany no mihoatra ny 50%, fa afaka mamaly mora foana ny fepetra emission nasionaly VI / Euro VI ary mahatsapa famokarana betsaka. Ireo goavambe vahiny toa ny motera diesel Mercedes Benz, Volvo, Cummins izay mitovy fari-pahaizany dia mbola eo amin'ny sehatry ny laboratoara ary miaraka amina fitaovana fanarenana hafanana. Mba hahafahana manao an'ity motera ity, Weichai dia nanambola 5 taona, 4,2 miliara ary mpiasa R&D an'arivony. Efa zato sy tapany izay nanomboka tamin'ny 1876 fa nitombo hatramin'ny 26% ka hatramin'ny 46% ny fahombiazan'ny hafanan'ny motera diesel lehibe manerantany. Maro amin'ireo fiaran'ny lasantsy fianakavianay no tsy nihoatra ny 40% hatreto.
Ny fahombiazan'ny hafanana 40% dia midika fa ny 40% ny angovo solika ao amin'ny motera dia navadika ho asa famoahana ny crankshaft. Raha lazaina amin'ny teny hafa, amin'ny fotoana rehetra manitsaka ny pedal gasikara dia manodidina ny 60% ny angovo azo avy amin'ny solika no lany fotsiny. Ireo 60% ireo dia karazana fatiantoka tsy azo ihodivirana
Noho izany, ny haavon'ny hafanana avo kokoa, ny fihenan'ny solika no mampihena ny lanjan'ny fihenan'ny angovo sy ny fihenan'ny famoahana
Ny fahombiazan'ny motera diesel dia afaka mihoatra ny 40% mora foana ary miezaka ny hahatratra 46%, saingy saika ny fetra. Ankoatr'izay, isaky ny fanatsarana 0,1% dia mila miezaka mafy
Mba hamoronana ity motera ity amin'ny fahombiazan'ny hafanana 50,26%, ny ekipa Weichai R&D dia nanamboatra endrika 60% ny faritra an'arivony ao amin'ny motera
Indraindray ny ekipa dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny hafanana amin'ny 0,01% fotsiny nefa tsy matory mandritra ny andro maromaro. Ny mpikaroka sasany dia tena mangetaheta loatra ka mila fanampiana avy amin'ny psikology. Tamin'izany fomba izany, ny ekipa dia nandray ny fiakaran'ny vidin'ny fahombiazan'ny 0.1 isra amin'ny node, nanangona kely ary nanosika mafy. Misy ny olona milaza fa ilaina ny mandoa vidiny lafo toy izany ho an'ny fandrosoana. Misy dikany ve ity 0,01% ity? Eny, misy dikany izany, ny fiankinan'ny sinoa amin'ny solika dia 70,8% amin'ny taona 2019.
Anisan'izany ny motera fandorana anatiny (motera diesel + motera lasantsy) mandany ny 60% amin'ny totalin'ny fanjifana solika ao Shina. Miorina amin'ny haavon'ny indostria ankehitriny 46%, ny fahombiazan'ny hafanana dia azo ampitomboina 50%, ary ny fihenan'ny gazoala dia azo ahena 8%. Amin'izao fotoana izao, ny motera diesel mavesatra ataon'i Shina dia azo havaozina ho 10,42 tapitrisa taonina isan-taona, izay mahavonjy gazy karbonika 10,42 tapitrisa taonina. 33,32 tapitrisa taonina, mitovy amin'ny ampahadimin'ny famokarana diesel totalin'ny taona 2019 (166,38 tapitrisa taonina)